Meksika: Vehivavy 20 taona no lehiben’ny polisy vaovao ao avaratr’i Meksika ao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Oktobra 2010 9:03 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Français, Nederlands, Español, Italiano, اردو, 繁體中文, 简体中文, Swahili, македонски, বাংলা, English
Marisol Valles García no anarany ary efa nantsoina hoe “vehivavy sahy indrindra any Meksika” izy[es].
Fa nahoana no taminy no natolotra io andraikitra goavana io? Richard Grabman no manazava ny raharaha ao amin'ny bolongany The Mex Files:
I Marisol Valles García, mpianatra momba ny fanadihadiana raharaha vono-olona no kandidà tokana nanolo-tena hiandraikitra ny fitarihana ny fitandroana filaminana tao. Ny sherifa vaovao (sady lehibe-na polisy tanora indrindra any Meksika) no misahana ny sampan-draharaha bitika izay zara raha manana andia-mpitandro filaminana roa isam-bondrom-paritra raha be indrindra
Miresaka momba ity raharaha ity i Cristhian García, mpamaham-bolongna Meksikana 21 taona:
Nijery izay mba ho lehiben'ny polisy tao amin'ity tanàna ity ny Ben'ny tanàna, ary rehefa nohadihadiany avokoa ny lehilahy rehetra manao io asa io dia nitsangana i Marisol ka niteny hoe: “Miforitra daholo ny rehetra, matahotra daholo izahay, fa andao havaditsika ho filaminan-tsaina amin'izay izany tahotra izany”
Ary ho fanaporofoany ny fahasahiany, dia nalaina sary tsy nanafin-tava i Marisol omaly ho marika fa mbola misy hatrany ny olona mivarotra aina eto Meksika vonona ny hiady amin'ny aferan-drongony sy ny andian-jiolahy.
Lahatsoratra iray ao amin'ny vohikalam-baovao La Polaka [es] no nanamafy fa “tsy misy tamin'ny lehilahy no hanolo-tena hanao polisy iry indrindra moa izany hoe hanao lehibe-na polisy izany noho ny tahotra ny hovonoina tahaka ny efa nanjò ireo mpanao fanamiana hafa marobe.”
Amin'izao fotoana izao moa dia nisioka an-tserasera (ni-tweet) izay nandre ny momba ity vaovao mikasika an'i Valles García ity na tao Meksika na avy any ivelany: nisioka ohatra i Adam D. Prince (@rabbitcincouno) avy any Ohio:
Azon'i Marisol Valles Garcia, 20 taona, mpianatra momba ny fanadihadiana vono-olona izay lasa lehiben'ny polisy ao Guadalupe, Meksika ny lokan'ny Maherifon'ny herinandro.
Nandray anjara namoaka ny heviny ihany koa i Laura Ruíz (@YoSoyBereNice) , avy any Veracruz, Meksika:
Marisol Valles Garcia izay 20 taona no lasa lehiben'ny polisy any Chihuahua. – Hitanareo amin'izany hoe “iza no mipataloha”.
Hita hatrany amin'ny kaontin'ilay mpanao sarimihetsika Tom Cruise ity vaovao ity, (@TomCruise):
Ilay 20 taona Marisol Valles Garcia no tena maherifo amin'ny fiainana andavanandro amin'ny mahalehiben'ny polisy any amin'ny tanàna anjakan'ny herisetra indrindra any Meksika azy. Andao hasehontsika ny fanohanana azy: http://bit.ly/ata0wm.
Farany, ao amin'ny bolongany Hermosillo ao amin'ny Periodista Digital [es], no voaresaka ity vaovao ity ary nahitana ny anaran'i Valles García izay olona avy ao amin'ny faritra misy azy mampirehareha azy:
Tsy isalasalana, nanome laza tsara ny faritra misy azy any Chihuahua indray ny “zipo”-n'iray amin'ireo vehivavy mahery sady tsara tarehy.
Izany eo ihany fa dia raisinay tsara ny hevitra amin'ny sora-baventy ahitana hoe IZY (vehivavy), MARISOL VALLES GARCÍA, na ny tahaka izany satria izy irery no nanaiky ilay asa.